Bosaso Media News | Page 5
Wakiilka cusub ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliaya Ambassador Nicholas Haysom iyo wafdi uu hogaamninayo ayaa maanta magaalada Hargeysa kulan kula qaatay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Kulanka Nicholas Haysom iyo Muuse Biixi Cabdi ayay kaga wada hadleen arrimo dhowr ...
Deegannada kala duwan ee maamulka Puntland ee dalka Soomaaliya waxaa ka socota howsha xulista xildhibaannada,haweenka ayaa si weyn ugu loolamaya sidii ay ugu soo bixi lahaayeen xulista xildhibaanada. Shirar kala duwan oo lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa si ...
Sucuudiga oo xabsiga kasoo daayay Khaalid Bin Talaal
Khaalid Bin Talaal oo kamid ah qoyska boqortooyada Sucuudiga oo horraan loo xiray inuu kasoo horjeeday howlgalka ka dhan musuq maasuqa ayaa lagu soo warramaya in xabsiga laga soo daayay. Qoyska Khaalid bin Talaal waxay baraha bulshada soo geliyeen sawirro ...
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horraysay waxaa uu dowladda Sucuudiga si toos ah ugu eedeeyay dilka weriye Jamaal Khaashuqji. “Waxaannu ognahay in amarka lagu dilay Khaashuqji inuu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga,” waxa ...
Sannad kasta maanta oo kale, marka ay taariikhdu ku began tahay 2-da bisha Nofeembar waxaa dunida laga xusaa munaasabadda soo afjaridda isla xisaabtan la’aanta la xiriirta tacadiyada ka dhanka ah suxufiyiinta caalamka. Soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa dalalka ay ...
HAY’ADAHA AMNIGA OO MUQDISHO KU QABTAY KOOX LACAGO SHARCI DARO AH KA QAADANAYAY BARAKACAYAAL
Ha’adaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaa ku soo bandhigay saldhiga degmada Hodan ee Muqdisho koox ay sheegeen in ay lacago sharci daro ah ay ka qaadanayeen barakacayaal degan Muqdisho. Kooxdaasi oo gaareeysa 10 -ruux ayaa waxaa ay ku sheegeen in ay ...
DHACDADII UU KU DHINTAY SULDAAN XASSAN CALI JIBRIIL OO XAL RASMI AH LAGA GAARAY
Guddigii isimada Puntland ee loo xil saaray xallinta dhacdadii uu ku dhintay suldaan Xassan Cali Jibriil ayaa maanta shaaciyay in si rasmi ah loo xalliyay arrintaasi. Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag oo ay soo qayb ...
KOONFUR GALBEED: SHURUUDAHA MUSHARRAXIINTA XILKA MADAXWEYNHA OO LA SHAACIYAY
Guddiga doorashada madaxtinimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta soo saaray shuruudaha looga baahanyahay musharrixiinta u tartamaya xalka madaxweynaha. Shuruudaha guddigu soo saaray oo ka kooban sagaal qodob ayaa waxaa kamid ah in shakhsiga u tartamaya xilka madaxweynaha Koonfur ...
Aqalka wakiillada (baarlamaanka) Itoobiya wuxuu maanta ansixiyey magacaabiddii ra’iisul wasaaraha waddanka Abiy Axmed uu u magacaabay Meaza Ashenafi inay noqoto guddoomiyaha maxkadadda sare ee federaalka. Tallaabada lagu magacaabay gabadhan ayaa qayb ka ah isbeddello uu dalka ka wado ra’iisul wasaaraha, ...
amiirka dhaxalsuga ah ee waddanka Sucuudi Carabiya, Maxamed bin Salmaan, ayaa waxa uu Mareykanka u sheegay in qoraaga la dilay Jamaal Khaashuqji uu u arkayay inuu ahaa Islaami halis ah, warbaahinta ayaa ku warramaysa. Amiir Maxamed ayaa waxaa lagu soo ...